ကျန်းမာကြပါစေ…ချမ်းသာကြပါစေ… | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Drama, Essays.. » ကျန်းမာကြပါစေ…ချမ်းသာကြပါစေ…
Posted by မိုး မင်းသား on Feb 25, 2014 in Drama, Essays.., My Dear Diary | 18 comments
” ဝေဒနာကို ဖွင့်ဟကြေငြာ…သီချင်းတစ်ပုဒ်ဆိုမယ်..ဖြစ်ပုံတကယ်ဆန်းကြယ်..ကိုယ့်မှာလေ..ပြန်ကာတွေးလေလေ…” ဆိုတဲ့ ..ကံ့ကော်တောဦးမျိုးအောင်ရဲ့ သီချင်းကို..
ဒါပေမယ့်… အကြောင်းအရာတစ်ခုကိုတော့ရင်ဖွင့်မှဖြစ်တော့မှာမို့ … ရင်ဖွင့်လိုက်ပါတယ်..။
ရပ်ကွက်ထဲက..ပြောမနာဆိုမနာလို ခင်ရတဲ့ ….သူငယ်ချင်းရဲ့ယောက္ခမ.. ဆေးရုံတင်လိုက်ရတယ်..။
ကျွန်တော် မသိလိုက်ပါဘူး ။ ကျွန်တော့်ဆီရောက်လာတော့… ဆယ်တစ်နာရီကျော်နေပြီ..။
သွေးလိုလို့လိုက်ရှာတာ ဘယ်မှာမှ မရဘူး..တဲ့ ။
ကျွန်တော့်သွေးက..ဘီသွေးဖြစ်နေတော့… သူ့ ယောက္မကလည်း..ဘီသွေးမို့ …လိုက်လှူပေးဖို့လာခေါ်တယ်..။
သွေးက..ဘယ်နှစ်ပုလင်းလဲလို့မေးလိုက်တော့… နှစ်ပုလင်းလို့ ..ပြောပါတယ်…။
ကျွန်တော်လည်း..မနေနိုင်တော့…အိမ်ရှေ့က ချာတိတ်လေးကိုပြေးနှိုးမိပြန်ပါတယ်.. ။
အိမ်ရှေ့က ချာတိတ်လေးက… ကျွန်တော့်ကို မငြင်းဆန်ချင်ပေမယ့်. ” ကျွန်တော် မနက် အလုပ်ဆင်းရဦးမှာ “လို့ ပြောပါတယ်..။
“အစ်ကိုလည်း..မနက်ကျရင်. အလုပ်သွားရမှာပါပဲ.. ခဏတော့ လိုက်ခဲ့ပါ..” ဆိုတော့လည်း.. လိုက်ခဲ့ ရှာပါတယ်..။
ကျွန်တော့် သူငယ်ချင်းရဲ့ ယောက္ခမက.. ဆင်းရဲတဲ့ အထဲမှာပါပါတယ်..။
ဘယ်သူမဆို.. ကျန်းကျန်းမာမာနဲ့ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်..နေချင်ကြတဲ့ သူတွေချည်းပါပဲ..။
မတတ်နိုင်လို့ ..၀င်လာတဲ့ ရောဂါကို..ကြိတ်မှိတ်ပြီး..ဆေးမြီးတိုနဲ့ ကု… မရတဲ့ အဆုံး..ဆေးရုံတင်လိုက်ရတယ်..ဆိုပါတော့ဗျာ..။
ပြောချင်တာက…ကျွန်တော်တို့ ကို..ကျွန်တော့်သူငယ်ချင်းက… ဆေးရုံကို..ဆိုက်ကားနဲ့ခေါ်ပါတယ်..။
ဆိုက်ကားဖိုးကုန်ပါတယ်…လမ်းလျှောက်ရင်လည်း.ရောက်တာပဲ..ဆိုပြီး…ပြောပြောဆိုတိုနဲ့ခပ်သုတ်သုတ် သွားခဲ့ ပါတယ်.. ။
လမ်း ခပ်မြန်မြန် လျှောက်ချိန်ကြောင့်..သွေးပေါင်တွေတအားတက်နေလို့ .. လှူလို့ မရသေးဘူးဆိုပြီး.. မိနစ် နှစ်ဆယ်လောက် စောင့်ပြီးမှ..
အဲဒီတော့မှ..လှူလို့ ရပြီလို့ ပြောပါတယ်…။
ဒါနဲ့သွေးလှူဘဏ် ကို သွားရပြန်ပါတယ်..။ သွေးလှူဘဏ်လည်းရောက်ရော..ည ဆယ့်နှစ်နာရီထိုးနေပါပြီ..။
အရမ်းအရေးကြီးလို့ … သေမယ့်လူနာဆို..ကျွန်တော်တို့ သွေးလှူမယ့်အဖွဲ့ … အသက်တောင် မှီမှာမဟုတ်ပါဘူးဗျာ…။
သွေးလှူဘဏ်က..သွေးစစ်ဖို့ ..တစ်ယောက်ကို 3900 စီသွင်းရမယ်လို့ ..ဆိုပြန်ပါတယ်..။
လူနာရှင်မှာ.. ငွေးကြေးမပြည့်စုံလို့ တောင် .သွေးကို..ဒါန ပြုရအောင် လှုဖို့ ဆုံးဖြတ်ထားတဲ့ လူတွေက.. သွေးစစ်ဖို့ထပ်ပေးရဦးမလားဗျာ…။
သွေးစစ်ဖို့ပိုက်ဆံမပါရင်.. ဆရာဝန်လက်မှတ်ရအောင် ယူခဲ့ … တစ်ယောက်ကို အလကားစစ်ပေးမယ်လို့ … သွေးလှူဘဏ်ရဲ့အပေါက်ခပ်ဆိုးဆိုးဆရာမတစ်ယောက်က..
ဒီဆရာမရဲ့ အော်ဟစ်သံကြောင့် ကျွန်တော်..ဒေါသ ထွက်မိပါတယ်..။
ကျွန်တော့်သူငယ်ချင်းကတော့… ဆရာဝန်လက်မှတ်ပြေးယူ… ..ပိုက်ဆံ 3900 လိုက်ရှာပြီး.. ပြန်လာတဲ့ အချိန်မှာ..ကျွန်တော်တို့သွေးက စစ်ပြီးနေပါပြီ..။
သွေးလှူလို့ ရပြီဆိုတဲ့ အဖြေကြောင့်…… ကျွန်တော်နဲ့ ..ကျွန်တော်ခေါ်လာတဲ့ ချာတိတ်တို့ ..ကုတင်ပေါ်မှာ….သွေးလှူဖို့ ..အဆင်သင့်ဖြစ်နေခဲ့ပါပြီ ။
သွေး ထုတ်တာ6မိနစ်လောက်ကြာပါတယ်..။
သွေးလှူပြီးတဲ့ သူတိုင်းကို..သွေးလှူတဲ့ ဘဏ်က.. သောက်ဆေးပေးပါတယ်. ။
အရေးပေါ်လူနာတွေအတွက်… သွေးလှူဘဏ်မှာ..သွေးအဆင်သင့်မရှိဘူးတဲ့ ဗျာ..။ ဟားဟား
သွေးလှူဘဏ်မှာ.. သွေးအဆင်သင့်မရှိပေမယ့်… သွေးတစ်ပုလင်းကို..25000 နဲ့ .. လိုအပ်ရင်..ယူလို့ ရတယ်လို့… မျက်မြင်တွေ့ လိုက်ရတော့…
ဘယ်သူ့ကို ဘယ်လို အံ့ သြရမလဲ…မသိတတ်တော့ပါ…။
ကျွန်တော့်သူငယ်ချင်းက…ခေါင်းတညိတ်ညိတ်နဲ့ဖြစ်လို့ …။( ဘယ်ဆေးရုံလဲ..ဆိုတာ..မပြောပြတော့ပါ..)
အိမ်အပြန်လမ်းမှာ…သူငယ်ချင်းက… Shark တစ်ဗူးစီတိုက်ပါတယ်..။
ကျွန်တော်နဲ့ ..ကျွန်တော်ခေါ်လာတဲ့ ချာတိတ်..နှစ်ယောက်သား…စကားမပြောဖြစ်ပဲ…
ဘာပဲပြောပြော.. ကျွန်တော်တို့ နှစ်ယောက်…ပီတိတွေရော…ဒေါသတွေရော… အံ့သြမှုတွေရော….
25.2. 2014 .
ဆေးရုံဆေးခန်းတွေအကြောင်းပြောရရင် မွေးလာတည်းကနေခုချိန်ထိ ကောင်းသတင်းတစ်ခါမှမကြားရသေးပါဘူး။
နိုင်ငံခြားကားတွေမှာ လူနာရှင်က စိုးရိမ်တကြီးနဲ့ ဆရာဝန်တွေ၊သူနာပြုတွေကိုအော်ဟစ်တာတွေမျိုးဆိုတာတွေက တကယ်လား လုပ်ရိုက်ထားတာတွေလားဟင်။
ကိုယ့်ဆီမှာတော့ ဆေးရုံရောက်ရင် ခရမ်းရောင်ထမီဝတ်တဲ့သန့်ရှင်းရေးမကအစ ငေါက်နေတာဆိုတော့ကာ…
လုပ်ရိုက် တာမဟုတ်ဘူး တစ်ကယ် ဗျ။ ခဏ ခဏ ကြုံရလွန်း လို့ဆေးရုံ ဆေးခန်းတွေမှာ ဝန်ထမ်း တွေကို abuse မလုပ်ဖို့၊ လုပ်ရင် အရေးယူမယ် ဆိုပြီး စာကပ် ထားရတဲ့ အထိဘဲ ။ အမှန် ကတော့ ဘယ်သူ့ ဘယ်သူ မှမအော် တာ အကောင်းဆုံးဘဲ ။
ကျန်းမာရင် ချမ်းသာမလားးး မသေချာပေမဲ့
ချမ်းသာမှသာ ကျန်းမာရေးကို စောင့်ရှောက်နိုင်မဲ့ ခေတ်ရောက်ပြီ၊။
မွန်မြတ်တဲ့ အလှူ အတွက် သာဓု သုံးကြိမ် လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲ ခေါ်ပါတယ် ဗျာ။
သွေး လိုရင် ခေါ်ပါဆိုတဲ့ fb မှာ share နေတဲ့ စေတနာရှင် တွေရဲ့ ဖုံး နံပါတ်လေးတွေလဲ မှတ်ထားဖို့ လိုမယ်ထင်တယ် ဗျ။
သွေးတိုးတာနဲ့ သွေးထဲမှာ ကိုလက်စထရော များလို့
လှူခွင့်ရှိတဲ့ လှူခွင့်ရတဲ့ သူတွေအတွက်
ငါ့ဆွေ ငါ့သား ငါ့မယား… နာ ဖျား ရောဂါ လွတ်ပါစေ…
သူများတတွေ သေချင်သေ… တို့တွေ အသက်ရှည်…
… ဘာမှမဟုတ်ဘူး ၊ ဖတ်ပြီး စိတ်အချဉ်ပေါက်လာလို့…
ကျနော်က ပုံမှန် သွေးလှူ နေကျ သွေးလှူရှင်ပါ ။
ဖတ်ရသလောက် ဒီ ကိစ္စမှာ အကြမ်းဖျင်း ပြောရမယ် ဆိုလို့ရှိရင် ၊
သွေးလှူဘဏ် ဘက်က အပြစ် မရှိဘူးလို့ ထင်ပါတယ် ။
” သွေးပေါင်တွေတအားတက်နေလို့ .. လှူလို့ မရသေးဘူး ”
ဒါဟာ စည်းကမ်းပါ လိုက်နာရပါမယ် ။
သွေးပေါင်တွေ တအားတက်နေ ကျနေတဲ့သူဟာ သွေးလှူခွင့် မရှိပါဘူး ။
တကယ်လို့ သွေးလှူနေတုန်း ၊ သွေးလှူရှင် တစ်ခုခုဖြစ်သွားရင် ၊
သွေးလှူတာကို လက်ခံတဲ့သူမှာ အပြစ် ရှိပါမယ် ။ အရေးယူ ခံရပါမယ် ။
” သွေးလှူဘဏ်က..သွေးစစ်ဖို့ ..တစ်ယောက်ကို 3900 စီသွင်းရမယ် ”
” လှုဖို့ ဆုံးဖြတ်ထားတဲ့ လူတွေက.. သွေးစစ်ဖို့ ထပ်ပေးရဦးမလားဗျာ ”
သွေးစစ်ဖို့အတွက် Chemical အထောက်အကူ ပစ္စည်းတွေ ၊
နိုင်ငံတော် က အလုံအလောက် မပေးထားပါဘူး ။
အဲဒီတော့ သွေးအလှူခံ က ပေးရင်ပေး ၊
မ ပေးရင်တော့ ၊ သွေးလှူရှင် က ပေးရပါမယ် ။
သွေးလှူဘဏ် ဝန်ထမ်းကတော့ မစိုက်နိုင်ပါဘူး ။
ဒါတောင် ၊ ကံ တော်တော်ကောင်းနေလို့ ၊
သွေးအိတ်ဖိုး နှင့် သွေးပိုက်ဖိုး မတောင်းလိုက်တာ ။
အမှန်က သွေးအိတ်ဖိုး နှင့် သွေးပိုက်ဖိုး ပါ ထပ်ပေးရမှာ ။
” အရေးပေါ်လူနာတွေအတွက်… သွေးလှူဘဏ်မှာ..သွေးအဆင်သင့်မရှိဘူးတဲ့ ဗျာ ”
သွေးလှူတဲ့သူတွေ နည်းနေလို့များလား ။
ဒီတစ်ခါ ရန်ကုန်ပြန်ရောက်ရင် မှတ်မှတ်ရရ သွား လှူဦးမှပါဘဲ ။
” သွေးတစ်ပုလင်းကို..25000 နဲ့ .. လိုအပ်ရင်..ယူလို့ ရတယ် ”
သူများနိုင်ငံတွေမှာတော့ တရားဝင် အရောင်းအဝယ် လုပ်လေ့ရှိပါတယ် ။
မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ ဘယ်လို အခြေအနေ ဖြစ်နေသလဲ မသိရတော့ ။
( ဆေးရုံနားမှာ ပိုက်ဆံအတွက် ကိုယ်ထဲက သွေးထုတ်ပေးနေတဲ့သူတွေ အများကြီးပါ )
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ၊ မသင်္ကာလို့ ရှိရင် ၊ အထောက်အထား ပြည့်စုံအောင် စုဆောင်းပြီး ၊
သက်ဆိုင်ရာကို တိုင်ကြားသင့်ပါတယ် ။
​တစ်​ခုသိချင်​တာက.. ​သွေးလှူရှင်​​တွေက ​သွေးကို အလကားလှူတယ်​.. အဲဒါကို ​သွေးလှူဘဏ်​မှာသိမ်းတယ်​.. ဒါဆို လူနာက ပိုက်​ဆံ​ပေးပြီးပြန်​ဝယ်​ရတယ်​ဆို​တော့ ထိန်းသိမ်းထားခ ဘတ်​ဂျက်​​ကြောင့်​လား.. လူနာအသက်​ထက်​ ပိုက်​ဆံက အ​ရေးကြီးလား.. ​သွေးလှူဘဏ်​က ​သွေးနဲ့ အရင်​သွင်းထားပြီး ​နောက်​မှ သုံးလိုက်​တဲ့​သွေးကို အစားပြန်​ထည့်​​ပေးလို့ မရဘူးလား.. ​တွေးကြည့်​တာပါ.
​အော်​​နေကြတာပါပဲ.. human right.. human resource .. ပြီးရင် လူကို တန်​ဖိုးမထားတာလည်း သူတို့ပဲ ..
သွေးခံအိတ် ( Donor Bag )
– သွေးကြောအပြင်ရေက်သွားရင် သဘာဝအရ သွေးဟာခဲပါတယ်။ အဲလိုမခဲအောင် chemical ထည့်ထားရပါတယ်။
– Donor Bag တန်ဖိုးက ၆၀၀၀ ပတ်ဝန်းကျင်ရှိမယ်ထင်တယ်
– ဘီပိုး၊စီပိုး၊HIV၊ငှက်ဖျား၊ကာလသားရောဂါ….အစရှိသဖြင့် သွေးလှူရှင်ကိုစစ်ရပါတယ်
– ဘီပိုး (HBs Ag) 8500
– စီပိုး (HCV Ab) 4500
– HIV 1-2 4500
– ငှက်ဖျား (MP ICT) 6000
– ကာလသားရောဂါ (VDRL) 4000
(တချို့လူတွေက အဲဒါတွေ အခမဲ့စစ်ကြည့်ချင်လို့သွေးလာလှူပါတယ်၊နည်းတော့နည်းတယ် ရှိတယ်)
Demand and Supply လဲမမျှပါဘူး
Elective surgery အတွက်သိမ်းထားတဲ့သွေးကို Emergency surgery အတွက်ယူသုံးလိုက်လို့ Elective သမားနောက်ဆုတ်လိုက်ရတာတွေတပုံကြီး
ဥပမာ ကျောက်ကပ်မှာကျောက်တည်တဲ့လူနာခွဲဖို့စီစဉ်ထားတဲ A သွေးကို ကားတိုက်ခံရတယ့် အရေးပေါ်လူနာအတွက်သုံးလိုက်လို့ ကျောက်ကပ်လူနာကို ခွဲမဲ့ရက် နောက် ၅ ရက် နောက်ဆုတ်လိုက်ရတာမျိုးအဖြစ်တွေ ပုံမှန်ဖြစ်နေကျပါ
စိတ်ရှင်းရှင်း အမြင်ရှင်းရှင်းနဲ့ စိတ်အနှောက်အယှက် ကင်းတဲ့အချိန် နေရာမှာ လှူခွင့်ရဖို့. . . .
ဒါက ဆေးရုံတင်ထားတဲ့လူနာသွေးလိုတာနော်။ ကျွန်မအသိတယောက်ရဲ့အကိုက ကင်ဆာနောက်ဆုံး အဆင့်။ အရမ်းကိုက်ခဲနေလို့အိမ်မှာဘယ်လိုမှမနေနိုင်တော့လို့ သက်သာအောင် ဆေးရုံတင်ဖို့သွားတာ ရန်ကုန်ဆေးရုံကြီးရော ဂျက်ကာလို့ခေါ်တဲ့ ဂျပန်ဆေးရုံကပါ သူတို့လူနာတွေကို ဆေးရုံတင်ရက်မဟုတ်လို့ဆို ပြီးသေကောင်ပေါင်းလဲလူမမာကိုလက်မခံပါဘူး။ သတ်မှတ်ရက်ရောက်မှဆေးရုံလာပြန်တင်ဖို့ပြောတာခံရပါ တယ်။ ရန်ကုန်ဆေးရုံကြီးက လက်မခံနိုင်ဘူးငြင်းလိုက်လို့ ဂျပန်ဆေးရုံကိုသွားဖို့ဟာကို သူတို့ အရေးပေါ်ကား မသုံးပဲမသွားရဘူးဆိုလို့ လူမမာခဗျာ မိနစ်လေးဆယ်လောက်စောင့်လိုက်ရသေးတယ်။ ဂျပန်ဆေးရုံရောက်တော့လဲလက်ခံရက်မဟုတ်ပြန်လို့ ဆိုတော့ အိမ်ပြန်ရပြန်ရော။ သတ်မှတ်ရက်ကျမှဆေ့း ရုံပြန်တင်လိုက်ရပါတယ်။ ကဲအဲဒါလဲ ဘယ်လိုပြောရင်ကောင်းမလဲဟင်။
ကျွန်တော်ဆို့ လမ်းလျောက်သွားတဲ့ အတွက်….ဆရာဝန်ကလမ်းလျောက်လတာဖြစ်တဲ့ အတွက်
နှလုံးခုန်မြန်နေပြီးသွေးတတ်နေတာကြောင့် လှူလို့ မရသေးတာကြောင့် ခဏနားပြီးမှသွေးပေါင်ပြန်ချိန်တာပါ
တကယ့် ကိုအသက်ကယ်ချင်ရင်တော့ သွေးတပုလင်းကို၂၅၀၀၀ကျပ်ဆိုလည်း
ပေးဝယ်ရမှာပါပဲ……ဒါပေမယ့် တစ်ရာကို၃၀တိုးနဲ့ အရင်ချေးငှားရမှာဖြစ်ပါတယ်…..
အတိုးနဲ့ အရင်းကိုတော့ ဆေးရုံကဆင်းတဲ့ အခါကျမှမျက်ပြူးဆံပြာနဲ့ ရှင်းရတော့ မှာပေါ့ 
ဘာလို့ လည်းဆိုတော့ ….မရှိတဲ့ ဆင်းရဲသားကချေးငှားထားတာကို…..
မိုးမင်းသားကဆင်းရဲတဲ့ ရပ်ကွက်မှာနေလို့ ဆေးရုံတတ်ရင်…ဂွမ်းကစ..ဆောင်သွားခိုင်းမိပါတယ်
ရာဟုလည်းပါတယ်ဆိုတော့ …ရှစ်ရက်ပေါ့ နော့ 
မိုးမင်းသား ရေ ။
အဘ က မိုးမင်းသား ရဲ့စာကို ကန့်လန့်တိုက်ရေးတာ မဟုတ်ဘူးနော် ။
အဘ က သွေးလှူနေကျ လူ ဆိုတော့ ၊
သွေးလှူဘဏ် က လူတွေနှင့်လည်း သိနေတော့ ၊
သူတို့ရဲ့ ဒုက္ခ အခက်အခဲ တွေကိုလည်း သိနေလို့ပါ ။
အဓိက အပြစ်တင်ချင်တယ် ဆိုရင်တော့ ၊
၁ ။ ကျန်းမာရေး ဘတ်ဂျက်ကို လုံလောက်အောင် ချ မပေးနိုင်တဲ့ ၊
အစိုးရ ကိုဘဲ အပြစ်တင်ရတော့မှာဘဲ ။
၂ ။ ဒါမှမဟုတ်လဲ ဆင်းရဲ မွဲတေလွန်းလှတဲ့ ၊
တိုင်းပြည်ကြီးကိုဘဲ အပြစ်တင်ရတော့မှာဘဲ ။
နောက်ပြီး သွေးတစ်ပုလင်းကို 25000 ဆိုတာက ၊
ပိုက်ဆံအတွက် ကိုယ်ထဲက သွေးထုတ်ရောင်းတဲ့သူတွေ ဆီက ၊
ဝယ်ရတဲ့ဈေး ထင်ပါတယ် ။
ခေါင်မိုးမလုံကလို့ မိုးရွာတာကို ခံနေကြရတာ ကိုယ့််တစ်ယောက်တည်းကြောင့်တော့ မဟုတ်ဘူးးးးး :'(
ရှေးလူဂျီးဒွေ ပြောကြတဲ့ အိုစာ မင်းစာ လေး စုထား ချန်ထား ဆိုဒါလေ …
အိုလာတဲ့အခါ နာမကျန်းဖြစ်လာရင် ဆေးဖိုးဝါးခဒွေ ရှိမှ …
မသေခင် အနာရောဂါရလို့ ခွဲခ စိတ်ခ ကုသခ မရှိလို့ကတော့
အသက်မရှင်နိုင် လက်မှိုင်ချ သေမယ့်နေ့ကို စောင့်ဆိုင်းရမယ့်အဖြစ်ဒွေ ဆိုးလှပါကြောင်း….
တတ်နိုင်တဲ့သူက တတ်နိုင်တဲ့ဘက်က ကူညီဖေးမကြတာပေါ့လေ…
ဂျပန်မှာတုံးက.. သွေးလှူမယ်ဆိုပြီး.. ကုတင်ပေါ်တက်တာ..သူတို့သွေး ထုတ်တော့.. ဆေးထိုးအပ်ကလေးနဲ့တခုစာ..
အဲဒါ.. မြန်မာပြည်က.. တပုလင်းဆိုတဲ့..ဟာကြီးတွေနဲ့ယှဉ်မြင်ပြီး.. ရီချင်တာ…
ဘာအလှူဖြစ်ဖြစ်.. ငါ့လက်ကလွတ် ဗြွတ်အလှူမဖြစ်သင့်ပါ..။
ကိုယ့်သွေးကိုတန်ဖိုးရှိရှိ.. ဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်လှူနိုင်ကြပါစေကြောင်း..။ :boss:
ကျွန်တော်ကြူံခဲ့ တာလေးပြောပြပါရစေ….ဆေးရုံက၀န်ထမ်းတွေ..လူနာကဆေးရုံပေါက်ရောက်တာနဲ့ လှည်းပေါ်တင်ပြီးward..ထဲကိုတင်သွားပါတော့ တယ်…
တစ်ထောင်တန်တစ်ရွက်ထုတ်ပေးမိပါတယ်….လူကငါးယောက်တောင်တစ်ထောင်နဲ့ ဘာလုပ်လို့ ရမှာ
တုန်းနောက်တစ်ထောင်ထပ်ပေးပါလို့ ပြောတော့ ပေးလိုက်ရသေးတာကို……